Soosaarayaasha looska kulul ee galvanized galley | Shiinaha Hot darafta galvanized Shirkadaha lowska, Warshad
Ahama nuts hex
Noocyada birta ah ee birta ahaanta loo yaqaan 'ahama nuts hex nuts' waxaa loo isticmaalaa iyadoo lala xiriirinayo boolal iyo boolal si loogu xiro loona dhejiyo qaybo. Dhexdooda, Nooca 1 ee lowska lixda ujeeddo leh ayaa ah kuwa ugu badan ee la isticmaalo. Loowska 'Grade C' waxaa loo isticmaalaa mashiinnada, qalabka ama qaabdhismeedka dusha sare leh iyo shuruudaha saxda ah ee hooseeya.
Digsiga kulul-faleebada galvanized
Lowska galvanized hot-dip wuxuu la jaan qaadayaa balka galvanized kulul, taas oo ah, lowska dib-u-dhiska ah waxaa lagu soo rogay daaweynta dusha galvanized kulul. Sababtoo ah galvanizing kulul ayaa lagu daboolay zinc, dib u habeyn ayaa lagama maarmaan ah. Galvanizing kulul waxaa lagu gartaa dusha sare ee dusha sare laakiin iska caabin adag oo daxal ah. Guud ahaan waxaa loo isticmaalaa banaanka wuxuuna leeyahay dhibco sare oo 4.8, 8.8, 10.9 iyo 12.9 ah.